Al-Shabaab Oo Sheegatay Qaraxyo Oo Waaweyn Oo Ka Dhacay Hudheel Ku Yaalla Magaalada Nairobi – somalilandtoday.com
Al-Shabaab Oo Sheegatay Qaraxyo Oo Waaweyn Oo Ka Dhacay Hudheel Ku Yaalla Magaalada Nairobi
(SLT-Nairobi)-Ugu yaraan laba qarax oo waaweyn ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Qaraxyada ka dib waxaa la maqlayay dhawaqa rasaasta. Ciidamada ammaanka ayaa gaadhay goobta uu weerarka ka dhacay oo ah dhismo ay ku yaaliin hoteel iyo xafiisyo.
Booliska Kenya ayaa xaqiijiyay weerarkaasi, waxaana qoraal uu boolisku soo dhigay Twitter-ka lagu sheegay in la xidhay waddooyinka ka ag dhow goobta uu weerarka ka dhacay. Kenya ayaa dhawr jeer oo hore waxaa ka dhacay weerarro argagixiso oo intooda badan ka dhacayay deegaannada u dhow xudduudda Soomaaliya.
Bishii Sebteembar ee 2013 mintidiinta Al-Shaabab ayaa galay Westgate oo ah goob laga dukaameysto oo ku taal Nairobi, waxa ayna halkaasi ku laayeen dad rayid ah oo halkaasi ka dukaameysanayay.